Semalt Inotsanangura Nzira Yokudzivirira Sei Mawebhusayithi Akawanikwa Kubva kuGoogle Search Results
Google inoshandura zvigadziridzo zvayo zuva rega rega uye kuchinja kwese hakusi nguva dzose kune webmaster uye mablogi. Pane nguva apo webhusaiti yako icharambidzwa nekuda kwezvinoenderana neGoogle mazano. Pamusoro peiyo, geo-chaiyo yekutsvaga migumisiro uye kukanganisa kunogona kuchinjwa - romanian passport in canada. Zvakanaka kudzivisa mawebhusayithi akawanda kubva mumigumisiro yekutsvaga kweGoogle kuitira kuti mapeji ewebhu ako aratidze nyore nyore. Ndinofara, kune dzimwe nzira dzekudzivirira dzimwe mawebhusayithi kubva mitsva yekutsvaga kweGoogle.
Zvimwe zvacho zvakakurukurwa pasi apa naIvan Konovalov, nyanzvi yepamusoro kubva ku Semalt Dhidhijiti.
1. Personal Website Blocklist:
Kuumba webhusaiti yehupfumi webhusaiti muGoogle Chrome yako iri nyore. Nokuda kweizvi, iwe unofanira kuisa kuwedzera kweGoogle. Kana yaiswa, iwe uchaona sarudzo yekuvhara nzvimbo kana URL dzinokugumbura kazhinji uye kusundira nzvimbo yako shure kumashure ekutsvaga kweGoogle. Kana ukangodonha paChikwata cheBlock, mawebsite acho achaparara pakarepo kubva mumigumisiro yeGoogle. Iwe unofanirwa kuyeuka kuti nzvimbo idzi dzinoonekwa mumigumisiro yekutsvaga ye Yahoo neBing, izvo zvinoreva kuti haugone kuvadzivisa kubva kune injini yekutsvaga s achishandisa iyi nzira.
2. Chengetedza musha wazvino weGoogle..com:
Zviri nyore kubvisa munhu aripo zvino kubva kuGoogle.com. Kana uine chikamu cheGoogle Chrome's Zvirongwa zvakasununguka, unogona kudzivirira mawebhusayithi evanonyunyuta kana evanhu vakuru kuburikidza neBlockIt button. Uye kana iwe ukanyora paZvinyarudzo, mawebsite akafanana achawanikwazve mumigumisiro yeGoogle yekutsvaga.
Kana uchida kuona mazita emasayiti akavharidzirwa munguva pfupi yapfuura, unongoda kuvhara paBlocklist icon mubhari rekushandisa. Izvi zvinowanzooneka mumuchena wearanduni uye ine ruoko rwekutsva.
3. Google Webspam Report Report plugin:
Kunze kwezvirevo zviviri zviri pamusoro, Google's Webspam Report plugin yakakoshawo kuenda nayo. Izvi zvinokubvumira kuti ugove nhepfenyuro yemashupiti uye evanhu vakuru se spam. Chaizvoizvo, ndiyo inyore uye yakanakisisa sarudzo sezvo iwe unogona kureva mawebhusayithi akawanda uye mabloggi panguva imwe chete. Kana zviitiko zvakakwana zve spam zvichitumirwa kuGoogle, injini yekutsvaga ichapedzisira ichinyora uye ichivhara nzvimbo kubva pamigumisiro yayo.
Nekuwedzera uku, unogona kudzivisa zvose zvisingabviri uye zvingakanganisika kubva kuGoogle yekutsvaga injini. Zvinosuruvarisa, iyi plugin haishande zvakanaka neS Safari nemamwe vashandisi vewebhu. Zvinoreva kuti iwe unogona kuzvishandisa chete kana iwe uchishambadzira mawebhusayithi kuburikidza neGoogle Chrome uye une browser ino seyoyo huru.
4. For Firefox Users:
Kana uri muchengeti weFoodfox, zvinogona kuisa zvakafanana zvinowedzera izvo zvicharambidza nzvimbo dzose dzisina kudiwa kubva mumigumisiro yekutsvaga. Somuenzaniso, kana iwe une WordPress site, unogona kutarisa plugin inobatsira kudzivirira nzvimbo dzisingadikanwi kubva kumigumo yekutsvaga Firefox. Kana uchinge wanyatsogadzwa, iwe unogona kuisa purogiramu uye kudzivisa kana kubvisa masayiti nemabloggi zvaunoda kuratidzira mumigumisiro yako yekutsvaga kweGoogle.
Maitiro aya ose ari nyore kutevera uye kubudirira kune marudzi ose emawebsite, blogs, uye mapeji ezvehuwandu hwevanhu.